Marihina fa naharitra 4 andro katroka ity fifaninanana natokana ho an’ny sokajy Cadet, Junior ary Sénior ity. Fantatra avokoa izany izao ireo tompondakan’i Madagasikara lahy sy vavy ary isan-tarika 2019 eo amin’ny kata sy kumité amin’ity taranja ity. Nahatsara zavatra ny fiaraha-miasa matotra teo amin’ny Federasionina Malagasin’ny Karaté tarihako sy ny minisitera mpiahy, hoy Atoa Ranavomanana Solofo Barijaona tetsy Mahamasina omaly. Tena nahavelom-bolo ny mpikatroka rehetra izany, hoy izy, fa hahafahana mampitombo ny herijikan’ity taranja ity izay somary nandalo fotoan-tsarotra ihany taona maromaro izay. Miarahaba ny taranja karate manokana kosa aho, hoy ny minisitra Tinoka Roberto nanotrona sy nanolotra ireo amboara teny an-toerana, fa tsy mena-mitaha amin’ny fifaninanana any ivelany any izay zavatra hitako teto. Fantatra fa 5 taona izao ity taranja karate ity tsy nivoaka nifaninana tany ivelany nefa ny nandehanany iray volana izay tany Gaborone dia nahatsapana fa manana traikefa ny mpikatroka karate Malagasy ka amin’ny maha tompon’andraikitra ny tenako eo amin’ity taranja ity no hilazako fa vonona ny hifanampy amin’ny mpitantana karate Malagasy aho hamelona indray ny afom-pitiavana ny karate Malagasy efa hananan’ny rehetra.
Teo amin’ny kata ary dia tompondaka ry Mitozo (Cadet), Tsiory (cadette), Mamy Mick (Junior), Gracia (Junior), Tsioriniaina (Individuel homme), Eliane Lalaina (Individuel Dame), Aro (par equipe dame).
Teo amin’ny kumité kosa dia tompondaka ry Todisoa Clément (Cadets), Tsiory (Cadettes), Mamy Mick (Junior hommes), Karine (Junior Dames), Tanjona (-60 kg homme), Billy Johary (-67 kg homme), Patrick (-75kg homme), Lalaina (-84kg homme), Finaritra (+84 kg homme), Fabby (-50 kg dame), Nofisoa (-55kg dame), Helene (-61kg dame), Tiantsoa (-68kg dame), Diana (+58kg dame), Analamanga 1 (par equipe homme), Analamanga 2 (par equipe dame).